Ndị ọzọ na-emepụta na ndị na-ebubata ya - China Factlọ ọrụ ndị ọzọ
Bonovo Grab Bucket bụ bọket siri ike, nke wuru bọket nwere 'isi mkpịsị aka' dabara maka ịrụ ọrụ ọzọ. Ọ bụ echiche dị oke elu, nke ọma karịa ngwaahịa ọ bụla ọzọ n'ahịa, ebe ọ na-enye onye ọrụ ohere iburu ihe ma ka na-agagharị na mpaghara ebe ndị na-egwupụta akụ juru.
Tinye ntụgharị na excavator gị na mkpịsị aka aka maka ọtụtụ ngwa njikwa ihe dị ka usoro saịtị, imegharị ihe mkpofu, mmebi na ngwa ngwa.
Isi mkpịsị aka ịwụ pụrụ iche eluigwe na ala imewe nke BONOVO na-enye ihe siri ike wuru isi mkpịsị aka kwesịrị ekwesị niile ụdị nke excavators. ọ na-arụ ọrụ nke ọma na niile ngwa ngwa couplers, na-eme ka na-agbanwe agbanwe bọket & ọzọ Mgbakwụnye a ikuku.